Himalaya Dainik » स्याङ्जाका मेयरलाई रारा तालमा किन कुटे भक्तपुरका केटाहरुले ?
स्याङ्जाका मेयरलाई रारा तालमा किन कुटे भक्तपुरका केटाहरुले ?
नेपालको सुन्दर ताल रारा जहाँ स्याङ्जाका चापाकोट नगरपालिकाका मेयर शिवकुमार गिरी कुटिएका छन् । शनिवार राति रक्सी खाएर विवाद हुँदा कुटपिट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका डिएसपी विनोद शर्माले जानकारी दिए ।
शनिवार राति करिब १० बजे मेयर गिरी सहितको टोली रारा ताल घुमेर फर्किएको थियो । राति कालिकोटमा रहेको सनलाइट होटलमा बास बस्न पुगेको थियो ।
होटलमा मेयरसहित पुगेको टोलीले रक्सी खाएर होहल्ला गरेका थिए । भक्तपुर र काठमाण्डुबाट रारा घुम्न गएको टोली सोही होटेलमा बस्न पुगेको थियो । होटेलमा मेयरको टोलीले होहल्ला गरेपछि आफूहरुलाई डिस्टर्ब भएको भन्दै हल्ला नगर्न भन्दा दुई पक्षबीच झडप भएको डिएसपी शर्माले बताए ।
उनीहरुबीच राति वियरको बोतल र ढुङगा हानाहान भएको थियो । झडपमा परी नगर प्रमुख गिरीसहित उनका स्वकीय सचिव राजकुमार मल्ल र नगर प्रहरी इन्चार्ज शोभित थापा र सवारी चालक घाइते भएका छन् । नगर प्रमुख गिरीको टाउकोमा ५ वटा टाँका, स्वीकय मल्ललाई १६ वटा टाँका लगाइएको छ ।
झगडा भएपछि कुटपिट गर्ने ८ जनालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रहरी प्रमुख शर्माले बताए ।
प्रकाशित मिति १८ कार्तिक २०७५, आईतवार २३:१२